Topnepalnews.com | सपना देख्ने कुरा केपीको मामिला हो कि नेपालको ? -भरत दाहाल
Posted on: May 19, 2016 | views: 425
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानी जहाजबारेको सपनाका संदर्भमा मैले राखेको भनाइप्रति केहि मित्रहरूको जायज आक्रोस देखापरेको छ ।
फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन असंभव रहेको भनेर मनोबल खसाउन खोज्ने एकथरि मानिसहरूको भनाइको संदर्भसंग यसलाइ जोड्न खोजिएको थियो तर उक्त संदर्भ उल्लेख नहुँदा र दलहरूका बीचको यो रत्यौलिको उल्लेख गर्दा प्रयुक्त 'भतुवा' भन्ने शब्दले दल र अन्य मानिसहरूको कित्ता अलग नगर्दा आक्रोस आउनु स्वाभाविक छ, जसका लागि माफि माग्नु मेरो कर्तब्य हो ।
सुगौली सन्धिपछिको नव औपनिवेशिक सत्ता राजनीतिलाइ धुरीमा राखेर दल चालाउनेहरू कसैले नेपालको वर्तमान संकट समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने मेरो सामान्य निष्कर्ष छ ।
यस मानेमा आधारभूत रूपमा म सबै दलहरूप्रति समान रूपमा आलोचक छु । नव र्आपनिवेशिक सत्ता राजनीतिमा केन्द्रीत रहेका व्यक्तिहरूमध्ये फलानाले देशलाइ पार लगाउने भयो भनेर मैले लेखेको हो भन्ने कसैलाइ भ्रम पर्न गएको छ भने त्यो संबन्धित व्यक्तिको बुझाइको समस्या हो । लेखाइलाइ फेरि पढे हुन्छ ।
तर निरपेक्ष आलोचनासंग मेरा २ वटा विमतिहरू छन् । पहिलो विमति के हो भने देश रसातलमा भासिन लागेको बेला कसैले सामान्य कामहरू गर्छ भने वा विगतका कर्महरूबाट केहि पृथक बन्न चाहन्छ भने त्यसो गर्न दिनु पर्छ ।
कोहि व्यक्ति केहि मात्रामा भए पनि सच्चिन खोज्छ भने राम्रै हो ।
दोश्रो विमति आलोचनाको संदर्भसंग छ । आलोचनाको एउटा पक्ष आन्तरीक छ । आधारभूत कामहरूलाइ वास्ता नगरेर माथिमाथिका मात्रगर्ने प्रवृतिको आलोचना हुनु पर्छ र तलतिरको काममा ध्यान दिन दबाब दिनु पनि पर्छ ।
अर्को पक्ष बाह्य शक्तिहरूको विवादसंग जोडिएको छ । फास्ट ट्रयाक र पानी जहाजको कुरा यसैसंग जोडिएको छ । भारतले आफू विना नेपालले केहि गर्न सक्दैन भन्ने प्रचार गराइरहेको छ, निराशातिर धकेल्न खोजि रहेको छ ।
ओलीले ट्रयाक र पानी जहाजको काम पूरा गर्छन्र कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न होइन, त्यो काम गरेर देखाउनु पर्छ भनि दबाब दिने हो ।
पानी जहाजको मामिला केपीको नभएर नेपालको हो । केपी हावा बन्लान तर मुद्दा नै हावा हो भन्न थालेपछि त्यसको सन्देश के जान्छ ?
गरेपछि दन्त्य कथाहरू रातारात उल्टो कथामा परिणत हुन्छन् ।
२ महिना अगाडिको कुरा संझनुहोस्, भारतबेष्ठित रहेको नेपालमा भारत विना केहि हुन नसक्ने र चीनसंगको पारवाहन संझौ ता सपनाको लड्डु मात्र भएको कथा खुबै सुनाइएको थियो । हामीलाइ दासका रूपमा जोति राख्न अपराधिहरूले यस्ता कथाहरू सैयौं बर्षदेखि रचेर नशामा लठ्ठयाएका थिए ।
सबै कुरा मानिसको सोंच र सिर्जनशिलतामा निर्भर छ । हौसला बुलन्द गर । असंभव भन्ने कुरा साहित्यमा हुँदैन ।
जसको मानसिकतामा असंभव भन्ने शब्द छ, त्यो मूर्दा हो ।
विरोध र सहानुभूतिमा मापदण्डको कुरा
आलोचना र समर्थनको ठोस मापदण्ड हुनु पर्छ । देशको आन्तरीक प्रशासन, विकास निर्माण र कुशासनका विषयमा केपी ओली सरकारको जति आलोचना गरे पनि हुन्छ ।
सरकारको रक्षा कबचका रुपमा पपुलिष्ट कुरा मात्र गरेर देशको दीर्घकालिन विकासको योजनालाई ओझेलमा पार्ने नियतको पनि समर्थन गर्नु हुँदैन । तर जहाँसम्म हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिहरुको मनोबल उठाउने र तिनीहरुको कृपा विना नेपालमा केहि हुन सक्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न भैरहेका षडयन्त्रहरुलाई प्रोत्साहन दिन प्रयासहरु भैरहेका छन्, त्यसलाई मलजल गर्नु हुँदैन ।
उत्तर कोरीयाले अमेरीकालाई चुनौति दिंदै आएको कुरा त्यसको त्यो हैसियत बनिसकेको छ भन्ने अर्थमा सकारात्मक छैन । पाकिस्तानले भारतलाई दिएको चुनौति त्यसको क्षमताको संदर्भमा उचित छैन ।
तर यस्ता घटनाहरुले नागरीकहरुको मनोबल उठाउँछन् र आफू पनि त्यो स्तरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छन् ।
फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउनै सक्दैन भनेर नेपाललाई सँधै विदेशी दासत्वमा बाँच्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिनेहरु र त्यो आँफै बनाएर देखाउनु पर्छ भन्नेहरुले दिने सन्देशमा आकाश पातालको अन्तर छ । केपीले पानी जहाज चलाउने कुरा गर्नुभन्दा देशभित्रको यातायातमा रहेको खराबिलाई सपार्नु पर्छ भन्ने कुरा कुनै कोणबाट नाजायज छैन तर नेपाल सँधै भारतीय बन्दगाहमा निर्भर नरहेर आफ्नै ताकतमा जहाज चलाएर देखाउनु पर्छ भन्ने सपना देख्नु नाजायज छैन ।
यसले चाहेपछि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्छ।
मेरो भनाई मात्र के रहेको छ भने भारतसंगको अहिलेको तनावका सन्दर्भमा त्यसको रणनीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने र जनताको मानसिकता निराशावादतिर धकेल्ने खालका आलोचनामा केन्द्रीत हुनु हुँदैन। यतिबेलाको हाम्रो दायीत्व भनेको ओलीले भारतीय योजनामा आँच आउने गरि जे बोलिरहेका वा गरिरहेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउ भनेर दबाब दिने हो ।
हाम्रो आलोचना देश देश विरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेका विदेशीहरुका लागि खेल्ने र तिनीहरू विना केहि हुँदैन भन्ने वातावरण बनाउने उर्जा नबनोस् ।